တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်သိကောင်းစရာများတွင်ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားလာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်သိကောင်းစရာများတွင်ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားလာ
ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပ၌ခရီးသွားလာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်! သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်နှင့်သင်၏အသုတသေနပွုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သောင် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုအမြော်အမြင်ရှိရှိစီစဉ်. ဒါဟာသင်ယူခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်နိုင်သည်ဘယ်လောက်သင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ညာဘက် mode ကို သို့မဟုတ်စျေးသက်သာနေရာများရွေးချယ်ရာတွင်. ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ; အရာအားလုံးများအတွက်ဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေအခြားနည်းလမ်းတလျှောက်ရှိပါတယ် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် - ကနေ ဆွဲဆောင်မှု မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ အစာ နေရာထိုင်ခင်းရန်.
သတိရ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားများအတွက် "ဆင်းရဲသားကိုမဟုတျပါ:"သူတို့နားလည်တဲ့နေ! ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်အဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ခံစားသွားရမတိုင်မီ, သင်ဆဲအံ့သြဖွယ်အမှတ်တရများအောင်နေချိန်မှာကယ်တင်မည်ငွေရှိသမျှကိုစဉ်းစား. သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အဖိုးတန်ဖြစ်ပါသည်; ထိုကွောငျ့, သငျသညျစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်သင့်တယ်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပမှာခရီးသွားဘို့ငါတို့ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များများမှာ:
အရာအားလုံးထက်ရှေ့၌သင်တို့ခရီးစဉ် Build. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်, သငျသညျမြား၏စာရငျးရရှိပါသည် ဥရောပခရီးစဉ်-သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်. လက်တွေ့ကျကျ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပ၌ခရီးသွားလာတဲ့အခါသင်ကသူတို့ကိုအားလုံးမစစ်ကြောဘဲနေလို့ရပါတယ်, သင်၏အချိန်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အဖြစ်ကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင်. ဒါကြောင့်အစားထိုသူအပေါင်းတို့ကြည့်ရှုနိုင်ရန်တွန်းအားပေး၏, သင့်ရဲ့ထိပ်တန်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကောက်. အခုတော့မြို့များကိုသင်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့မြေပုံစစ်ဆေး စဉ်းစား ချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူသောများမှာ, ပြီးတော့ဘာလဲ အခြားမြို့ငယ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်များမှာ.
ဥပမာ, သွားရောက်လည်ပတ်၌သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ပါသည် ပဲရစ်စ်နှင့်အမ်စတာဒမ်. လမ်းကြောင်း Check, သငျတို့သဘရပ်ဆဲလ်နှစ်ခုအကြားတည်ရှိနေတဲ့မြို့ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်! ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မြို့ကြီးများ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုအကြားဖြစ်ကြောင်းသူတွေကို အိမ်မက်များကိုအိပ်မက်မက်သည်, သင်သည်သင်၏ခေါပိုပေါက်ကွဲသံကြီးရနိုင်.
သင်သည်သင်၏ကြိုတင်ယူထားသည့်အခါသင်ကအကောင်းဆုံးနှုန်းထားများရ ဟော်တယ် ကြိုတင်မဲအတွက်သို့မဟုတ်ဘော်ဒါဆောင်အခန်းများ. အဆိုပါအစောပိုင်းက, ပိုကောင်း. အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိုရွေးချယ်ပါ.
5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များမှာအစုံအပြည့်အနှစျသိမျ့ဆိုလိုပေမယ့်နှင့် ဇိမ်ခံ, တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစမတ်ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး. ထို့အပွငျ, တစ်ဦးအတွက်တည်းခို စျေးကြီးတဲ့ဟိုတယ်အခန်း သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတစ်ဦးစွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကပါဝင်ပတ်သက်အဓိကအားလျှင် sightseeing နှင့်ရှာဖွေစူးစမ်း မြို့တော်. ဒါဟာသင်သာအတွက် crash ဖို့အခန်းတစ်ခန်းကို အသုံးပြု. ရမည်ထွက်နှင့် ပတ်သက်. သင်၏နေ့ရက်ကာလအများစုကိုဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်.
သင်တို့ကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျဧညျ့ဖလှယ်မှုသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်အခမဲ့ဒေသခံတစ်ဦးနှင့်အတူနေထိုင်စေခြင်းငှါ. အခြားအစျေးပေါနေရာထိုင်ခင်းများပါဝင်သည် နေထိုင်ရန်အဆောင်များ ကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုဆောင်-စတိုင်အဆောက်အ. ထိုကဲ့သို့သော Airbnb အဖြစ်အွန်လိုင်းဈေးပေါ် ROOM တွင်ငှားရမ်းခြင်းတစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပမှာခရီးသွားအတွက်လည်းစံပြများမှာ.
gastronomic ပျော်မွေ့ ဥရောပမှာနေရာတိုင်းများမှာ. သင်တို့မူကားတစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပမှာခရီးသွားနေလျှင်, လုပ်ရမယ့်စမတ်ကျတဲ့အရာကစျေးကြီးတဲ့ခရီးသွားနေရာတွေမှာစားတာကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပဲ. စားသောက်ဆိုင်ဥပဒေကြမ်းများကိုသင်၏အစာဘတ်ဂျက်ကိုချိုးဖျက်မခံပါနဲ့.
အစား, စားသည် ဒေသခံတစ်ဦးနဲ့တူ နှင့်စစ်မှန်သောယဉ်ကျေးမှုအရ အတှေ့အကွုံ. စားနပ်ရိက္ခာငျးကုနှင့်လမ်းပေါ်အစားအစာ အားလုံးဥရောပမြို့ကြီးများကိုကျော်ရှိပါတယ်, သူတို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါစုံလင်ဟော့စပေါ့င် စစ်မှန်အစားအစာ. ထိုအခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသူတို့သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည် အနည်းငယ်ယူရို. သငျသညျအစားအစာများအပေါ်ကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်, အဆိုပါကုန်စုံစတိုးဆိုင် hit. သငျသညျချက်ပြုတ်ဖို့နည်းလမ်းရှိပါတယ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတည်းခိုနေတယ်ဆိုရင်, သင်အလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တစ်ပန်းကန်အဘို့အပါဝင်ပစ္စည်းများဝယ်ဖို့.
ရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်နေသော ခရီးစဉ်အကြားဖြစ်ကောင်းဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပမှာခရီးသွားလူတို့အဘို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအကြံပေးချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်. အဲဒီအစားအကူးအပြောင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိသောနေ့နာရီဖြုန်း၏, တစ်နေ့ချင်းညချင်းရထားပေါ်တွင်သွားကြဖို့ရှေးခယျြ. ဒါဟာညဉ့်အဘို့ဟိုတယ် booking ထက်ဘယ်လောက်စျေးသက်သာသငျသညျကိုအံ့သြစေ. သေချာတာပေါ့, သင်လက်လွတ်ရပါလိမ့်မယ် တောတောင်ရှုခင်း, သင်မူကားအသစ်တခုမွို့၌ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်နိုးထပါလိမ့်မယ်!
Ready to start traveling in Europe onabudget and ရထားစာအုပ်ဆိုင်? အစောပိုင်းစာအုပ်ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့်ထိုင်ခုံပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအပေးအယူ get!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဘတ်ဂျက် #traveleurope မြတ်နိုး .ရာဝတီ မင်းချစ်သူ